आयो पन्चे बाजा एप्स,जहाँ भेटिन्छ वर र बधु | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, मंसिर १७, २०७७ १८:१०:१७
१७ मंसिर, काठमाडौं । बिवाहका लागि तपाई केटा वा केटीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? तपाईले खोजे जस्तो वर वा वधू नपाएर हैरानी पाइरहनु भएको छ ? यदि यसो हो भने अब तपाईले तनाब लिनु पर्ने छैन ।
घरमै बसीबसी पनि उपयुक्त वर वा वधू खोज्न सक्नुहुनेछ । हाफफूल टेक्नोलोजीले बिवाहका लागि केटा वा केटी खोज्न सहयोग होस भन्ने हेतुले ‘पञ्चेबाजा’ एप ल्याएको छ ।
यस एपबाट तपाईले आफ्ना छोराछोरी वा अन्य कोही आफन्तका लागि कस्तो वर वा वधू खोज्न चाहानु भएको सोहीअनुसार खोज्न सक्नुहुनेछ ।